ငါ့ဘေးမှာ မင်းရှိရင် အပိုင်း (၁၀) – အပြာစာအုပ်များ
“ချစ်လား မီးငယ် ..”
“ အင်း..ချစ်တယ် ..ကိုဈန်ရကော ..”
“ ကိုဈန်ရ လို့ မခေါ်နဲ့တော့လေ ..”
“ ဘယ်လို ခေါ်ရမှာလဲ …”
“ ယုံလား ..သီချင်းထဲက လိုလေ ..အဲလို ခေါ်..”
“ကိုကို လို့လား ..”
“ အင်း ..”
ထိုအခိုက် အပြင် က စတားလုံး ဟောင်သံ ကြားလိုက်ရ သည် ..။စတားလုံး သည် လူစိမ်းကိုဘဲ ဟောင်လေ့ရှိ သည် ..။ဈန်ရ ကားဂိုဒေါင်ထဲက ထွက်ကြည့်လိုက် သည် ..။ ခြံအနောက်ဘက် စည်းရိုး ကို ထိုးဟောင်နေ သည် ..။ဈန်ရ သွားကြည့် သည် ..။ ဘာမှတော့ မတွေ့ ..။အမရာ ဂိုဒေါင်ထဲက ထွက်လာ သည်။
“ ဘာကို ဟောင်တာလဲ ..”
“ ဘာမှ မတွေ့ဘူး …”
အိမ်ဘက် က ခြံစောင့် အဖိုးကြီး ရောက်လာ သည်။
“ ဘာဖြစ်လဲ ကိုဈန်ရ ..”
“ ဘာမှတော့ မတွေ့ဘူး..အဘမောင် ..စတားလုံး ကို လှောင်အိမ်ထဲ ပြန်ထည့်ပေး နော..”
“ ဟုတ်ကဲ့ ကိုဈန်ရ ..”
အမရာ နဲ့ ဈန်ရ အိမ်ဘက်ကို ပြန်လျောက်လာ သည် ..။အိမ်ဖေါ်ချုပ် ဒေါ်ဒေါင်း သူတို့ဘက်ကို လျောက်လာ သည် ..။ လက်ထဲမှာ ဖုန်းကိုင်ထား သည် ..။
“ ဘာလဲ..ဒေါ်ဒေါင်း …”
“ မီးငယ် အတွက် ဖုန်းလာလို့ ..”
“ဘယ်သူ ခေါ်တာလဲ ..”
အမရာ ဖုန်းကို လှမ်းယူလိုက် သည် ..။ဈန်ရဖက်ကို လှည့်ပြီး..“ နောက်တော့တွေ့မယ် ..”လို့ ပြောသွား သည် ..။ ဈန်ရလဲ သူ နေတဲ့ အခန်းထဲကိုဝင်ခဲ့ သည် ..။ဒီနေ့ ထူးထူးခြားခြားတွေ ဖြစ်ပျက်သွားပြန် တာ အိပ်မက်တခုလိုဘဲ ..။ အမရာ နဲ့ ချစ်သူတွေ ဖြစ်သွားပြီ ။ဈန်ရ စိတ်မလုံတာက အန်တီလေး နဲ့ သူ ညိနေတာ ..။ အမရာ တနေ့သိသွားရင်…ဆိုတာ စဉ်းစားမိလိုက်တာနဲ့ဈန်ရ ရင်တွေ ပူလာ သည် ..။ အန်တီလေး ကိုယ်တိုင်က သူနဲ့ ဈန်ရ သည် တိတ်တိတ်ပုန်း ဘဲ ချစ်ကြ ဖြစ်ကြမယ်လို့ ပြောခဲ့ သည် ..။ အမရာ နဲ့ချစ်ကြတာတောင် ဘယ်လို ဖြစ်လာအုံးမယ် မသိ ..။ အန်တီလေး နဲ့ကတော့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင် ..။ ဟူး …။ သီဟ သည် သူ့ညီမ နဲ့ ချစ်နေတာ သိသွားရင် ဘာဖြစ်မလဲ ..။
သီဟ အဖေကြီး ကရော ..သဘောမတူမှာ သေချာနေ သည် ..။ သူ့သမီး ကို သူတို့လိုဘဲ ချမ်းသာတဲ့ သူဌေးနဲ့ဘဲ သဘောတူမှာ သေချာနေတာဘဲ .. စောစော က အမရာ နဲ့ ဖက်ခဲ့ နမ်းခဲ့ကြတာ ပြန်စဉ်းစား မြင်ယောင် မိနေ သည် ..။ အော်..မီးငယ် ရယ် …. ။ဒို့နှစ်ယောက် ဇာတ်လမ်း ..ဘယ်လို ဖြစ်လာအုံးမလဲ မသိဘူး …။ဖုန်းမြည်လာ သည်။အိုး …အန်တီလေး …။
“ ဟေး…ဈန်…ဘယ်မှာ လဲ …”
“ ကျနော် ..သီဟတို့ အိမ်မှာ ..အန်တီလေး …”
“ အင်း ..ဈန့်ကို အိမ်စောင့်ခိုင်းတယ် ဆို ..ဟင်း ..ဈန်မရှိရင် မဖြစ်တော့ဘူးလား…ဈန့်ကို သတိရနေလို့ ..လွမ်းနေလို့ကွာ..ဒို့နှစ်ယောက် ဘယ်တော့ တွေ့ကြအုံးမှာ လဲ …”
“ အန်တီလေး တွေ့ချင်နေရင် မနက်ဖန် လာခဲ့မယ် လေ …”
“ အင်း..လာခဲ့..ဖုန်းဆက်လိုက် …လွမ်းတယ် ကွာ..တွေ့ချင်တယ်…”
အန်တီလေး သည် လေသံတိုးတိုးလေး နဲ့…“ ဈန့်အနမ်းတွေကို အရမ်းလွမ်းနေတယ် …” လို့ ပြောပြီး ဖုန်းချသွား သည် ..။အမရာ သည် အိပ်လို့ မရ ..။ ဈန်ရ နဲ့ ပွင့်လင်းကြပြီး သူ နမ်းတာတွေ ကြောင့် အမရာ့ ထမိန်တွေ စိုကွက်သွားရအောင်ဘဲ စိတ်တွေ လှုပ်ရှားသွား ခဲ့ရ သည် ..။ တတ်နိုင်ရင် ဈန် နဲ့ ဒီညဘဲ ထပ်တွေ့ချင် သည် ။ဒေါ်ဒေါင်းတို့ ရှိနေလို့ အိနြေ္ဒဆည်နေရ သည် ..။ အမရာ့အခန်းကနေပြီး ရေကူးကန်နားက ဈန်ရ နေတဲ့ အခန်းကို မမြင်ရနိုင်လို့ ဒေါ်မဒီချုပ် နေတဲ့ အိပ်ခန်းဘက် အနားက ၀ရံတာ ဆီကို လျောက်ခဲ့ပြီး လှမ်းကြည့်လိုက်သည် ..။ အိုး ..ဈန်ရ အခန်း က မီးလင်းနေဆဲ ..။သူ့ဆီ သွားချင်လိုက်တာ ..။ သူ့အနမ်းတွေ ကို အမရာ ထပ်လိုချင်နေ သည်။
ဈန်ရ ခြံထဲ တပတ် လျောက် သည် ..။ ခွေးခြံတွေ နား ရောက်တော့ စတားလုံး က ခုန်ပေါက်ပြီး နုတ်ဆက် သည် ..။ ခြံစောင့်ကြီး အဘမောင် ကို ခြံအရှေ့ဘက်..တံခါးကြီးနားမှာ ထိုင်နေတာ တွေ့ရ သည် ..။ သူ့ခါးမှာ ချိတ်ထားတဲ့ ဖုန်း မြည်လာ သည်။
“ဟင်..မီးငယ် …. ”
“ ဟလို ..မီးငယ် …”
“ ကိုကို ..”
အို..မီးငယ် က သူခေါ်စေချင်သလို ကိုကို လို့ ခေါ်နေပါလား ..။သူ့ရင်ထဲ နွေးကနဲ ဖြစ်သွား သည် ..။
“ ကိုကို အခု ဘယ်မှာ လဲ ..”
“ ခြံထဲ လမ်းလျောက်နေတယ် …”
“ ကိုကိုနဲ့ တွေ့ချင်တယ် ..”
“ ကိုကိုလဲ တွေ့ချင်တာပါဘဲ မီးငယ် ..လူတွေ သိသွားရင် ကိုကိုတို့ ဝေးသွားကြရမှာတော့ ကြောက်တယ် ..”
“ အင်း..မနက်ဖန်ကျရင် တွေ့မလား ..ကိုကို နဲ့ တနေရာရာ မှာ အစားစားကြမလား ..”
“ စားလေ..မီးငယ် ဘာစားချင် လဲ ..”
“ အစားက အဓိက မဟုတ်ဘူး ..ကိုကို နဲ့ တွေ့ချင်တာ ..အဓိက ..ကိုကို …”
“ဟုတ်ပြီ မီးငယ်..ကိုကိုတို့ တွေ့ကြမယ် …”
မီးငယ် ဖုန်းချသွား အပြီး ဖုန်းမြည်လာပြန် သည် …။
“ဟာ….ခင်ချိုအုန်း …. ”
“ ချိုချို ..”
“ လွမ်းတယ် ..ကလပ် ကို လာမှာ လား..မနက်ဖန် …”
“ အင်း..မနက်ဖန်တော့ …. အင်း..”
“ မလာဘူးပေါ့ ဟုတ်လား ..ဆရာဈန် က ချိုချို့ကို မတွေ့ချင်ပါဘူး .ချိုချို သိပါတယ် …. ”
“ ဒီလို မဟုတ်ပါဘူး…ချိုချို ရယ် ..တွေ့ချင်ပါတယ် …”
“ ဆရာ အားတဲ့ အချိန် ဖုန်းခေါ်လိုက် နော် ..”
“ ကောင်းပြီ ချိုချို …”
“ ဆီးယူး ဆရာ …တာ့တာ ..ဂွတ်နိုက် …”
အင်း …ချစ်သူ ၀ိုင်း ၀ိုင်း လည် တော့ ဖြစ်နေပြီ …။အမရာ သိပ် ပျော်နေ သည် ..။ဈန်ရမောင် နဲ့ ချစ်သူ ဖြစ်ကြပြီး ပထမဆုံး အတူတူ လျောက်လည်တဲ့ နေ့ ..။ဒီနေ့က အမရာ့ စိတ်ကြိုက် လုပ်တဲ့နေ့ ..။အမရာအိမ်က ထွက်တော့ တယောက်ထဲ ..။ ဈန်ရမောင် နဲ့ က ပလာဇာတခု မှာ ချိန်းထားပြီးမှ ဈန်ရမောင် မောင်းတဲ့ကားနဲ့ သွားကြ သည် ..။ ဈန်ရမောင် နဲ့ အစား အတူတူ စားကြ သည် ..။ အမရာ ကြိုက်တဲ့ မြေအိုးမြီးရှည် နဲ့ မာလာဟင်း သွားစား သည် ..။ အမရာ သည် အရမ်းပျော်ပြီး သူ့သူငယ်ချင်း မြသက်ထား အိမ်ကိုလဲဝင်သည် ..။ ဈန်ရမောင် နဲ့ ချစ်သွားပြီ ဆိုတာ ကြွားတာ လေ။
အမရာ က သူ့ကို အသဲအသန် လိုက်နေတဲ့ ဗိုလ်မင်းဂါ တွေ့အောင် တွဲပြရအုံးမည် လို့ ဈန်ရမောင် ကို ပြော သည် ..။ “ မလုပ်ပါနဲ့ မီးငယ်ရယ် ..မလိုပါဘူး ..” လို့ ဈန်ရမောင် က ပြောပေမဲ့ မရ ..။“ ကိုကို မသိပါဘူး..ဒီကောင်စုတ် က အမရာ နဲ့ သူနဲ့ ကြိုက်နေကြသလိုလို လျောက်ပြောနေတာ …မုန်းလွန်းလို့ …”အမရာ နဲ့ ဈန်ရ ပြည်လမ်းမကြီးပေါ်မှာ မောင်းနေ သွားနေတဲ့ အချိန် ကားအစိမ်းရောင် တောက်တောက် တစီးတအား ကျော်တက် သည် ..။ ရှေ့ကနေ ပိတ်မောင်း သည် ..။ အမရာ က ဒီကား ကို ချက်ချင်း မှတ်မိ သည်။
“ဟွန်း ..အဲဒါ ..ဇော်လွန်းရွှေ ဆိုတဲ့ကောင် ..တောက် ..မီးငယ် ကို လိုက်လိုက် နှောက်ရှက်တဲ့ ကောင်စုတ် ..”ဈန်ရ လဲ အချင်းမများချင်လို့ ကားအ၇ှိန်ကို လျော့ပြီး သူတို့လဲ ၀ယ်စရာတွေ ရှိလို့ လှည်းတန်းဘက်ကို ချိုးကွေ့လိုက် သည် ..။ အင်း..အမရာ လို နံမည်ကြီး သူဌေးသမီး အချောလေး နဲ့ ကြိုက်ရင် ဒီလိုဟာတွေ နဲ့ တွေ့ရမယ် ဆိုတာ သိပြီးသားဘဲ လေ။
အမရာ က ဈန်ရ တားလဲ မရဘဲ ရွှေဆိုင်တခု ကို ၀င်ပြီး ..“ ကိုကို့ကို သိပ်ချစ်တယ် ” ဆိုတဲ့ စာတန်းလေးပါတဲ့ ရွှေပြားဆွဲကြိုး တကုံး ၀င် အပ် သည် ..။ သူသိပ်ချစ်ကြောင်း သိဖို့ လည်ပင်းမှာ ဆွဲထားရမည် …တဲ့..။အမရာ နဲ့ လမ်းခွဲအပြီး ဈန်ရ သည် အန်တီလေး ဆီကို ပြေးရ သည် ..။အန်တီလေး က သူမ အိမ်မှာ အိမ်ဖေါ်တို့ ထမင်းချက်တို့ ခြံစောင့်တို့ ရှိနေတဲ့ ရှေ့ ဈန်ရ နဲ့ တွေ့ဖို့ မလွတ်လပ် လို့ ဈန်ရလာရင် တနေရာမှာ သွားတွေ့ကြမည် လို့ ပြော သည်။
ကားမောင်းနေချိန် စင်ကာပူ ကနေ သီဟ ဖုန်းခေါ် သည်..။ နောက် နှစ်ရက်ကြာရင် ပြန်လာမည် တဲ့ ..။ သူ ပြန်မလာခင် သူ့ကောင်မလေး “ ကြွေမ ” ဆီကို သွားပြီး ဘာလိုလဲ မေးပေးပါဦး ..တဲ့ ..။အန်တီလေး သည် သူ့အိမ်ဖေါ် မနု ကို ..“ ငါ ဈန်ရမောင် ကို သွားဆရာဝန် ဆီ ပို့ခိုင်း မလို့..ဖုန်းဆက်တဲ့ လူ ရှိရင် ဟန်းဖုန်း ကို ခေါ်ခိုင်း ..” လို့မှာပြီး ဈန်ရမောင် ကား နဲ့ လိုက်ခဲ့လေ သည်။
“ဘယ်ကို သွားမလဲ ..အန်တီ လေး . .”
“ပါရမီ ဘက် ကို သွားမယ် …”
အန်တီလေး သည် ဈန်ရမောင် ကို သူမ မကြာသေးခင် က သက်သက်သာသာ ရလို့ ၀ယ်ထားတဲ့ တထပ်တိုက်နဲ့ ခြံ ကို ခေါ်သွားတာ ..။ ဒီတိုက် နဲ့ ခြံ သူမ ၀ယ်ထားတာ လူတွေ မသိကြဘူး ..။ တိုက်ထဲ ရောက်တာ နဲ့အန်တီလေး ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် သည် သူမက စတင်ပြီး ဈန်ရကို ဖက်ပြီး နှုတ်ခမ်းတွေကို အငမ်းမရ နမ်းစုတ်လေ သည် ..။ ဈန်ရ က အန်တီလေး ရဲ့ တင်ပါးအိအိတွေကို ဆုတ်ညှစ်သလို အန်တီလေး သည်လဲ အားမလို အားမရ နဲ့ ဈန်ရ ကျောပြင်တွေကို သူမ လက်သဲချွန်ချွန်လေးတွေ နဲ့ ကုတ်ခြစ် လိုက် ဈန်ရ တင်ပါးတွေကို ဆုတ်နယ်လိုက် လုပ်နေသည်။
“ ဈန်…ဒို့သိပ်လွမ်းနေတယ် ..ဈန် ဒို့ကို ချစ်ပေးပါကွာ…ချစ်ပေး …”
ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် သည် တုန်ရီတဲ့ လက်တွေနဲ့ သူမ အ၀တ်အစားတွေကို ချွတ်ပစ်နေ သည် ..။ဈန်ရ သည် အန်တီလေး တအားလိုလားနေတာ ကို ဖြည့်ဆည်းပေးရတော့မည် ကို သိလို့ သူ့အ၀တ်တွေကို ချွတ်ပစ်လိုက် သည် ..။ နှစ်ယောက်စလုံး ဗလာကျင်း သွားကြတော့ ဈန်ရ လဲ အန်တီလေး ကို ဧည့်ခန်း က ဆိုဖါကြီးပေါ် ဆွဲလှဲချလိုက်ပြီး အန်တီလေး ပေါင်ကြား ကို မျက်နှာထိုးအပ် လိုက် သည်။
အမွှေးမရှိ ပြောင်တင်းမို့မောက်နေတဲ့ အန်တီလေး အဖုတ်ကြီး သည် ကာမရှေ့ပြေး အရေကြည်တွေ နဲ့ စိုစိုရွှဲနေသည် ..။ ကာမစိတ်တွေ ထကြွနေလို့လားမသိ ..။ဖါးခုံညင်းကြီးတကောင်လို ဖေါင်းကြွ ခုံးထနေ သည် ..။အသားဖွေးဖွေးဖြူသူ အန်တီလေး ရဲ့ ဆီးခုံမို့မို့ကြီး က ဖြူဖွေးနေပြီး အကွဲကြောင်း နီညိုညိုကြီး က ထင်းနေ သည် ..။ နှုတ်ခမ်းသားထူထူလေးနှစ်ခု ကို ဈန်ရ သူ့လက်မ နဲ့ လက်ညှိုးသုံးပြီး ဆွဲဟလဲ ဟလိုက်ရော..အန်တီလေး နုတ် က..“အို..ဈန်…ဘာလို့ စပ်ပပ် ကို ဖြဲကြည့်နေတာလဲ..” လို့ တိုးတိုးလေး ပြောသံကြားလိုက်ရ သည် ..။ ဈန်ရ သည် သူ့လျာကြီး ကို အန်တီလေး အဖုတ်ထဲကို ထိုးသွင်းကာ မွှေနှောက်လေပြီ။
“အို .. .အို…ဈန်ရယ် …ဘာတွေ လုပ်နေတာလဲ ..အန်တီလေး …ကို …..အို . . .အ….အ….အ…..”
ဈန်ရ ရဲ့ လျာကြီး သည် အန်တီလေး ရဲ့ စောက်စိ ကို အပြားလိုက် ဖိယက်လိုက်..လျာထိပ် နဲ့ ရစ်ဝိုင်းလိုက်..မထိတထိ တို့လိုက် အမျိုးမျိုး ကစားပေး နေလေတော့ အန်တီလေး မှာ နဂိုထဲက တအား ခံချင်နေတာမို့ အခုလိုလဲ ဆွပေးလိုက်ရော..စိတ်တွေ ပြင်းထန် လွန်းလာပြီး…“ ဒို့ကို ချစ်ပေးတော့..စပ်ပပ် ယားလှပြီ…”လို့ တောင်းခံ လေ သည်။
ဈန်ရ သည် အန်တီလေး ရဲ့ “စပ်ပပ် ” ကို ပြွတ်ကနဲ နမ်းလိုက်ပြီး မှ ထရပ်လိုက် သည် ..။ အန်တီလေး လဲ ဈန်ရ သူမ ကို တက်လုပ်တော့မည် ထင်ထားပြီး ပက်လက် အနေအထားမှာ သူမပေါင်တန်တွေကို ဖြဲကားပေး လိုက် ပေမဲ့ ဈန်ရ က သူမ မျက်နှာဆီကို တောင်နေတဲ့ လိင်တန်ကြီး ထိုးကပ်ပေးလာလို့ ကြောင်ပြီး မော့ကြည့် သည် ..။
“ စုတ်ပေး …”
ဈန်ရ လိင်တန်ထိပ်ဒစ်ကြီး က သူမ ပါးစပ်ပေါက် နား ကပ်နေ သည် ..။ အလိုလို ငုံမိရက်သား ဖြစ်သွားရ သည် ။
“ဟုတ်ပြီ..စုတ်..စုတ်..လျာလေး နဲ့ ကလိပေး …”
ဈန်ရ ရဲ့ အမိန့်တွေကို နာခံမိနေ သည် ..။ သူလုပ်ပေးစေချင်တဲ့ အတိုင်း လုပ်ပေးမိ သည် ..။ လိင်တန်လုံးပတ်က ကြီးလွန်းတာကြောင့် ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် ပါးစပ် နဲ့ မဆန့်မပြဲကြီး ဖြစ်နေ သည် ..။
“စူတ်…စုတ်…ကောင်းတယ် …အား…အား……လျာ…လျာ…လျာ နဲ့ ထိုးပေး…လျာကို ကစားပေး ….”
ဈန်ရ သည် အန်တီလေး နို့ကြီးတွေကို လှမ်းကိုင်ကာ ဖျစ်ညှစ် နေ သည် ..။ နို့သီးခေါင်း နီနီလေးတွေ ကို လက်မ နဲ့ လက်ညှိုး သုံးပြီး ချေနယ်နေတော့ အန်တီလေး မျက်စိတွေ မှိတ်ကျသွားတာ တွေ့လိုက်ရ သည် ..။အန်တီလေး ကို စုတ်ပုံစုတ်နည်းတွေ ပြသပေး သည် ..။အန်တီလေး သည် အရိပ်ပြ အကောင်ထင် ..အကင်းပါးလျင်တဲ့ မိန်းမတယောက် ဘဲ..။ သူ လိုချင်တဲ့ ပုံစံအတိုင်း ခဏချင်း လုပ်နိုင်သွား သည် ..။တကယ် ဆို ဈန်လိုလားလို့သာ စုတ်ပေးနေရတာ ..။ အန်တီလေး သည် ခံချင်လှပြီ..။ စပ်ပပ် က ရွစိရွစိ ဖြစ်နေရ သည်။
ဈန်ရမောင် က ရပ်ခိုင်းလိုက်လို့ လိင်တန် ကို ပါးစပ်ကနေ ချွတ်လိုက် သည် ..။ လိုလားနေသော ဈန်ရမောင် ရဲ့ လိင်တန်ကြီး သူမ အဖုတ်ထဲ ထိုးသွင်းလိုက်သောအခါ မှာ ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် ဖင်ကြီးတွေ တုန်ခါသွားရ သည် ..။ သူမ လိုလားတောင့်တနေရတဲ့ ဟာ ရရှိသွားလို့ မျက်လုံးစုံမှိတ်ပြီး…ကျေနပ်သွား သည် ..။ ဈန် ဆိုတဲ့ကောင်လေး သည် တကယ် ချစ်ပေးတတ် သည် ..။ တကယ့်ကို အားကောင်းတဲ့ ကောင်လေး ..။ ခါးအားကောင်းတဲ့ ဈန်လေး ..။ဆောင့်ပေးတာ သူမ တအိုအို နဲ့ အောက်မှ ပြန်ပြီး ကော့ပေး မိရ သည်။
ဈန်ရမောင် သည် ဆောင့်အားကောင်း၇ုံတင်မက အကြာကြီးလဲ လုပ်နိုင် သည် ..။ ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် သည် ပြီးခြင်း ဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတာ သိရရုံ မက အကြိမ်ကြိမ် လဲ ပြီးရ သည် ..။ ပြီးအောင် သူ လုပ်ပေး သည်။ .ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် ပြီးမှ သူ အမြဲ ပြီး သည် ..။ယခုလဲ ဈန်ရ အပီအပြင် ဆွဲပေးပြီ ..။ စစချင်းပိုင်း လုပ်သလို စီးချက်မှန်မှန် ဖတ် ကနဲ ဖတ်ကနဲ မဟုတ်တော့ ..။ဖန်းဖန်းဖန်းဖန်း ဆကိတိုက်ဆွဲတာ …။ ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် အော်နေရ သည် ..။ ဘယ်နှစ်ကြိမ် ပြီးသွားခဲ့ရသလဲတောင် မသိတော့။
အရမ်းကောင်းသွားရလို့ ဆိုဖါကြီးကို ဆုတ်ညှစ်ပြီး ခေါင်းကို ဘယ်ညာ ရမ်းခါပြီး အော်ဟစ်ရင်း ပြီးသွားရပြီးချိန် ဈန်ရ ကတော့ ဆက်ဆောင့်နေတုံးဘဲ ..။ သူမပြီးသေးဘူးဘဲ..။ ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် ကျေနပ်မှုရရှိသွားပြီးပေမဲ့ဈန်ရ ပြီးဖို့လိုသေးတာကြောင့် သူလုပ်တာကို ငြိမ်ခံနေပေမဲ့ စောစောကလို တုံ့ပြန်တာတွေ မရှိတော့ ..။ဈန်ရကလဲ ဒါကို သတိပြုမိ သည် ..။
“ အန်တီလေး ..ကုန်းပေးပါလား…”
“ အင် …”
ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် ရှက်သလိုဖြစ်မိ သည် ..။ ဒါဆို ဒုတိယအကြိမ် ရှိပြီ..။ ဈန်ရမောင် ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် ကို ကုန်းခိုင်းတာ ..။ ဖင်ကြီးကုန်းပေးရမှာ က တော်တော် ပက်စက်သလိုဘဲ ..။ အတွေ့အကြုံ က သိပ်မရှိသေးလို့ နဲနဲ ရှက်နေသေး သည် ..။ လိင်တန်စုတ်ပေးတာတောင် ဒီနေ့ ဈန်ရ သင်ပေးလို့လုပ်တတ်သွားသည် ..။ ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ဈန်ရ ခိုင်းတာကို လုပ်ပေးလိုက် သည် ..။ ရှက်တော့ ရှက် သည်။
ဖင်ကုန်းပေး၇တာက ဖင်ကြီးထောင်ထားလို့ ခေ၇ပွင့်ရော စောက်ဖုတ်ရော ပေါ်တင်ကြီး ပြထားရသလိုဘဲ မဟုတ်လား ..။ ဈန်ရမောင် က သူမဖင်နောက်တဲ့တဲ့ မှာ နေရာဝင်ယူပြီး ခါးလေးကို လက်နှစ်ဘက် နဲ့ ဆုတ်ကိုင်လိုက်သောအခါ မကြာခင် လိင်တန်ကြီး သည် စူဖေါင်းပြူးထွက်နေသော သူမအဖုတ်ထဲကို ၀င်လာတော့မည်ကို ရင်တထိပ်ထိပ် နဲ့ စောင့်မျှော်နေရပေ သည် ..။ဈန်ရမောင် လဲ ခရေပွင့် နီနီလေး ကို တွေ့သွားတော့ စိတ်ကူးတမျိုးရသွား ပြီး သူ့လက်ညှိုး နဲ့ ခရေပွင့်လေးကို အသာပွတ်ပေးနေ သည်။
“ အို..ဟင့်..ဟင့်..ဟင့်…ဈန်….ဈန်….ဘာတွေ လုပ်နေတာလဲကွာ ..အဲဒါကို ထားလိုက်ပါကွယ် …ဟိုဟာကိုလုပ်လေ …”
“ လှလို့ …အန်တီလေး ..”
“ အိုကွယ်..ဖင်ပေါက်များ လှတယ်လို့..မဟုတ်မဟတ်..ဈန် ..လုပ်မှာဖြင့် လုပ်တော့ကွာ….”
ဖြူဝင်းကျော့ရှင်းသော ကိုယ်လုံးလှလှနဲ့ ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် ဖင်ကုန်းပေးတာ သူတွေ့ဘူးသမျှ ဒီဒေါ့ဂီစတိုင်ပုံစံတွေထဲမှာ အလှဆုံးဘဲ လို့ ဈန်ရ ထင် သည် ..။ဈန်ရ လဲ သူ့အကြောအပြိုင်းပြိုင်း ထောင်ထနေတဲ့ လိင်တန် တုတ်တုတ်ကြီး ရဲ့ ဒစ်ဖျားကို အန်တီလေး ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် ရဲ့ အဖုတ်ပေါက်မှာတေ့ကာထိုးသွင်းလေ သည် ..။ အရေတွေ စိုစိုရွှဲနေတာကြောင့် ..“ပွပ် ..” ဆိုတဲ့အသံ နဲ့ ဒစ်လုံးမြုပ်ရုံ ၀င်သွား သောအခါ ဆက်မထိုးသေးဘဲ ပြန်ဆုတ်ပြီး ပြန်သွင်းသည် ..။အင်…အင် …ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် သူ့လိင်တန်ထိပ်ဖူးရဲ့ ကလူကြည်ဆည်နေတာကို မျက်လုံးလေး ပိတ်ပြီး ခံစားနေဆဲ လိင်တန်ကြီးတထစ်ထစ် နဲ့ ထပ်ပြီး ၀င်လာ သည်။
ဈန်ရ လဲ ခါးသိမ်လေး ကို ဆုတ်ကိုင်ပြီး တချက်ချင်း..ထိုးပါတော့ သည်။
ဖင်ဖြူဖြူကြီးအောက် က အမြောင်းလိုက်ကြီး ဖေါင်းပြူးထွက်နေတဲက စောက်ဖုတ်ကြီး နဲ့ ဖင်ပေါက် နီညိုညိုလေးကို မြင်ကြည့်ပြီး လုပ်ရတာဖြစ်လို့ ဈန်ရ အရမး သဘောကျကြိုက်လေ သည် ..။ အိနြေ္ဒ..မာနကြီးသော သူဌေးမလှလှကြီး ကို ဖင်ကုန်းခိုင်းပြီး အနောက်က ဆောင့်နေခွင့်ရတာလဲ သူ့အတွက် အိပ်မက်လိုဘဲ ..။စိတ်တိုင်းကျ ဆောင့်ဆောင့်ထည့်ပြီး မကြာခင် ဆောင့်ချက်တွေ ဒလစပ်မြန်လာရင်း..သုတ်များ ..ဒလဟော ပန်းထုတ်ခါ ပြီးသွားရတော့ သည်။
ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် က တနေကုန် တချီပြီး တချီ ဖြုတ်ကြ မှုတ်ကြဖို့ ပြောပေမဲ့ ဈန်ရ လဲ အလုပ်အကြောင်းပြပြီး ပြန် သည် ..။ ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ်ကို အိမ်ပြန်ပို့ ပြီးနောက် သူ့ကို ဖုန်းဆက်ဆက်ခေါ်နေသော ခင်ချိုအုန်း ဆီကိုပြေးရ သည်။ခင်ချိုအုန်း က သူတို့အိမ်ကို လာဖို့ ခေါ် သည် ..။ သူတို့ အဖေနဲ့အမေ က ခင်ချိုအုန်း ရဲ့ ညီမလေး နဲ့ သူ တို့ဇာတိ တောင်တွင်းကြီး ကို သွားနေ သည် ..။ အိမ်မှာ ခင်ချိုအုန်း တယောက်ထဲ ရှိနေ သည် ..။ ညဘက်ရောက်မှ ခင်ချိုအုန်း ရဲ့ အမ၀မ်းကွဲတယောက် က လာအတူ နေပေး အိပ်ပေးမှာ လို့ ခင်ချိုအုန်းက ပြောပြသည်။
သူရောက်သွားတော့ ခင်ချိုအုန်း က ၀မ်းသာအားရ ပြေးဖက်ခါ ကြို သည် ..။ သူတို့ က ရန်ကင်းတိုက်ခန်း မှာနေတာဖြစ် သည် ..။ တိုက်ခန်းထဲကို ရောက်တာ နဲ့ ခင်ချိုအုန်း သည် ဈန်ရ ရဲ့ ရင်ခွင်ထဲကို ရောက်လာ သည် ။“ဆရာဈန်ရယ် ..လွမ်းတာ အရမ်းဘဲ…” တဲ့ ..။ဈန်ရ သူမကို ဖက်ထားလိုက်တော့ ခင်ချိုအုန်း သည် အိမ်နေရင်း ခပ်နွမ်းနွမ်း ဘလောက်စ်လေး ၀တ်ထား ပြီး အတွင်းမှာ ဘာအတွင်းခံမှ မပါတာ အိဖြိုးသော သူမ နို့ကြီးတွေ ရဲ့ အထိအတွေ့ကြောင့် သိလိုက်ရ သည်။
စောစောကဘဲ ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် ကို ၂ချီဆွဲလာသော ဈန်ရ သည် ခင်ချိုအုန်း ရဲ့ နို့အိအိကြီးတွေ ရဲ့ အထိအတွေ့ကြောင့် သူ့ပေါင်ကြားက ဒုတ်က တင်းကနဲ မာကျောလာပြန် သည် ..။ သူ့ဒုတ် သည် ခင်ချိုအုန်းရဲ့ ပေါင်တဖက်ကို ထိမိနေတာကြောင့် ဒုတ်မာလာတာကို ခင်ချိုအုန်းလဲ သိပြီး..သူမလက်ခုံနဲ့ လာထိပွတ်နေ သည် ..။ ဒုတ်သည် ခင်ချိုအုန်း ခုလို မထိတထိ ဆွလိုက်တာကြောင့် တဟုန်ထိုး မတ်မတ်တောင်လေတော့ ခင်ချိုအုန်း လဲသူ့နားနား ကို နှုတ်ခမ်းလေး ကပ်ပြီး..“ စုတ်ပေးရမလား..ဆရာဈန် ..” လို့ မေးလေ သည်။
ခင်ချိုအုန်း ရဲ့ လက်ကလဲ သူ့ဒုတ်ကို မိမိရရကြီး ဆုတ်ကိုင်ဖျစ်ညှစ်နေပြီ ..။ ကြည့်ရတာ ခင်ချိုအုန်း သည်တော်တော့်ကို တောင့်တမွတ်သိပ်နေပုံရှိ သည် ..။ ဈန်ရ လဲ သူမ ဘလောက်စ်လေး ရဲ့ ရှေ့ကွဲ နှိပ်ကြယ်သီးတွေ ကို ဖလောက်ဖလောက် ဆိုပြီး အကုန်ဆွဲဖွင့်ပစ်လိုက် သည် ..။ ဘာမှအထဲမှာ ခံဝတ်မထားတာကြောင့် ခင်ချိုအုန်း ရဲ့ ဖြူဝင်းတင်းမာကော့ထောင်နေတဲ့ နို့တွေ ကို တပ်မက်ဖွယ် တွေ့လိုက်ရလေပြီ။
နို့သီးခေါင်းလေးများ သည် သူစို့စို့ပေးလိုက်လို့လား..ခင်ချိုအုန်း ဘဲ သူမဖါသာ ချေပေးနေလို့လားမသိ..စတွေ့တုံးကထက် ပိုမိုတင်းမာကြီးထွားလာသလိုဘဲ ..။ ဈန်ရ စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ဘဲ ဘယ်ဘက် က နို့သီးခေါင်းနီနီလေး ကို ငုံ့ကာ စို့လိုက် သည်။
“အို ..ဆရာဈန် ရယ် . . ”
ခင်ချိုအုန်း ခါးလေးကော့တက်ပြီး မျက်လုံးတွေ မှေးစင်းကျသွား သည် ..။ သူစို့သည် ..။ တပြွတ်ပြွတ် နဲ့ စို့ပေးသည် …။“အာ..ဟာ..အို…..အို..ဆရာဈန်ရယ် ……” ခင်ချိုအုန်း ကယောင်ကတန်းတွေ ရေရွတ်နေ သည် ။သူ့လက် က ခင်ချိုအုန်း ထမိန်စ ကို ဖြေလိုက်သည် ..။ ထမိန်လေး ဖြုတ်ကနဲ ကွင်းလုံးပုံ ကျွတ်အကျ သူ့နှုတ်ခမ်းတွေက ညာဘက် နို့သီးခေါင်းလေး ကို စို့ပေးပြန် သည် ..။ အောက်ပိုင်းမှာဘဲ အတွင်းက ဘာမှ ၀တ်မထားတာကြောင့် ဖြူဝင်းသော ပေါင်တန်..ဘိုက်သားချပ်ချပ်အောက် က ဖေါင်းနေတဲ့ ဆီးခုံ ကို မြင်လိုက်ရတော့ ဈန်ရရဲ့ လိင်တန်ဒုတ် သည် ခေါင်း တဆတ်ဆတ် နဲ့ လှုပ်ခါသွားသလိုဘဲ။
ဈန်ရ သည် နို့စို့ပေးနေရင်း..သူ့ဒုတ်ကို အရင်းကနေ ဆုတ်ကိုင်ကာ ခင်ချိုအုန်းရဲ့ အဖုတ်အကွဲကြောင်း ကို ပွတ်တိုက်လေတော့ရာ ခင်ချိုအုန်းမှာ ငိုချင်ရဲ့ လက်တို့ ဆိုသလို နဂိုထဲက ခံချင်နေသူမို့ အခုလို အပွတ်ခံရသောအခါ..တအားယားယံလာရပြီး..သူမကို..ချစ်ပေးပါတော့လိုအ၇ှက်မရှိတောင်းဆို..တောင်းခံလာရ သည် ..။ ခင်ချိုအုန်း သည် ဈန်ရ လာမှာမို့ သူတို့တိုက်ခန်းပြူတင်းပေါက်များ က တရုပ်ကပ် တွေကို ပိတ်ထားတာ တွေ့ရသလို သူမ အ၀တ်အစားတွေကိုလဲ အောက်ခံ အတွင်းခံ မ၀တ်ဘဲ တထပ်ထဲ ရှိနေစေတာ ဈန်ရ သတိထားမိလေ သည် ..။ ဈန်ရ လဲ “ အ၀တ်တွေ အားလုံး ချွတ်လိုက်ပါလား ချိုချို..”လို့ ပြောလိုက်တော့ ခင်ချိုအုန်းလဲ သူမ အပေါ်ပိုင်းမှာ ကျန်နေတဲ့ ဘလောက်စ်အနွမ်းဘေး ကို ဖယ်ခွာပစ်လိုက် သည်။
“ ဆရာဈန် လဲ ချွတ်လေ…” လို့ တခစ်ခစ် ရယ်ရင်း ပြော သည် ..။ ဈန်ရ လဲ သူ့ကိုယ်ပေါ်က အ၀တ်တွေ အားလုံး ကို ချွတ်ပစ်လိုက်သောအခါ ခင်ချိုအုန်း သည် အ၀တ်မဲ့ ကိုယ်လုံးတီး နဲ့ ဈန်ရ ကို စူးစူးဝါးဝါး စိုက်ကြည့်ပြီး ..“တောက် ..ဆရာဈန် က မိုက်တယ်ကွာ..တကယ့် ဆက်စီ..ဘရက်ပစ် ထက်သာတယ် ..” လို့ပြော၇င်း အိပ်ခန်းဘက်ကို လှည့်ပြေးသွားလေ သည်။ခင်ချိုအုန်း ရဲ့ စွင့်ကားတဲ့ ဖင်ဖြူဖြူကြီးတွေ ခါရမ်းလှုပ်တုန်သွားတာကို ဈန်ရ ငေးကြည့်နေပြီး တအားပြေးလိုက်လေ သည်။
← ငါ့ဘေးမှာ မင်းရှိရင် အပိုင်း (၉)
ငါ့ဘေးမှာ မင်းရှိရင် အပိုင်း (၁၁) →